Apple inomira kusaina iOS 11.2.5 | IPhone nhau
Apple inomira kusaina iOS 11.2.5
Musi waFebruary 19, vakomana vanobva kuCupertino vakaburitsa vhezheni yekupedzisira, pasina mabheji epfuura, eIOS 11.2.6, vhezheni yakamanikidzwa kuburitsa nekuda kwematambudziko ari muIndia Telugu hunhu zvaive zvichikonzera huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa kupunzika uye dzimwe nguva kumira kushanda zvachose.
Vhiki rapfuura, masocial network anga aine abuzz nevashandisi vane mukaka wakashata vakagovana hunhu uyu kuruboshwe uye kurudyi, izvo zvakakonzera maApple Chitoro kumhanya musangoKunyanya zvakadaro, kuitira kuti vanga vasina zvakakwana neiyo bhatiri yekutsiva chirongwa icho Apple yakavhurira makumi maviri nemaviri euros kumidziyo yese isingapfuure bvunzo yebhatiri.
Mazuva gumi mushure mekuburitswa kweshanduro yekupedzisira yeIOS 10, vakomana vanobva kuCupertino wamira kusaina vhezheni yapfuura, iOS 11.2.5, vhezheni yakaburitswa muna Ndira 23 uye yave ichiwanikwa kusvika nezuro kuisa, kunyange zvine musoro kuti haina kukurudzirwa kana isu tisingade iye wechiTelugu kuti aite chinhu chayo pane yedu kifaa uye isu takamanikidzwa kuenda kuApple Apple Chitoro kana kuti kudzorera mudziyo wedu kubva muvare.
Neiyi nzira, iyo yega vhezheni yeIOS iyo iripo parizvino kune vese vashandisi vanodzoreredza chishandiso chavo nhamba 11.2.6, kubvira panguva ino uye kunyangwe paine huwandu hwakawanda hwerunyerekupe hwakanongedzera kuvhurwa kweIOS 11.3, iyi vhezheni itsva haina kusvika kumusika.
Pakutanga, 11.3 yakagadzirisa dambudziko iro rinopihwa neTelugu hunhu pazvinhu zvese zvakagadziriswa neshanduro yakaenzana kana yapfuura iOS 11.2.5. Zvinopedzisira zvaita sekudaro iOS 11.2.6 yakanganisa kuronga iyo Apple yaive nemabhegi ayo, saka zvingangoita kuti isu tichafanirwa kumirira imwe vhiki kuti tinakidzwe nenhau dzainotipa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inomira kusaina iOS 11.2.5
Chinoitika chitsva chiitiko cheZuva reMarudzi reVakadzi munaKurume 8
Iyo iPhone X inotsvaira mibairo yakapihwa gore rino MWC